March | 2012 | Myanmar My Always
ပညာရှင်က ပညာစကား၊ လူဖျင်းတွေက လူပြိန်းစကား သို့မဟုတ် အာရ်အက်ဖ်အေ တနင်္ဂနွေစကားဝိုင်း
Posted on March 30, 2012	by nyuntshwe
တစ်နေ့က (၁၈ မတ်လ ၂၀၁၂) အာရ်အက်ဖ်အေ တနင်္ဂနွေစကားဝိုင်းက စိတ်ဝင်စားစရာလဲ ကောင်းတယ်၊ စိတ်ပျက်စရာလဲကောင်းတယ်။ စကားဝိုင်းဖွဲ့သူတွေက အစီအစဉ်မှူး ဦးခင်မောင်ငြိမ်း၊ ဒေါက်တာ (ပါရဂူ) ဆလိုင်းငွေကျုံးလျံ၊ အိန္ဒိယမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (ပြည်ပြေးအစိုးရ ရာသက်ပန်ဝန်ကြီး) နဲ့ ပြည်ပြေးအစိုးရ ကုလသမဂ္ဂရာသက်ပန် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသောင်းထွန်းတို့ ဝိုင်းဖွဲ့ ပြောကြတာ။ ပြောတဲ့အကြောင်းက အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး။ ဒေါက်တာဆလိုင်း ငွေကျုံးလျံက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဆိုင်ရာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ပါရဂူဘွဲ့ယူထားရုံမဟုတ် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ အခြေံဥပဒေပြုစုခြင်းဆိုင်ရာဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူ၊ အဲလို သိတဲ့လူက ပညာစကားပြောတာ ဆန်းတော့လဲ … Continue reading →
AdoptaTerrorist program A Canadian female libertarian wrotealot of letters to the Canadian government, complaining about the treatment of captive insurgents (terrorists) being held in Afghanistan National Correctional System facilities. She demandedaresponse to her letter … Continue reading →
ရေးသင့်တာကတော့ အတော်ကြာသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖန်ကလပ်ဗ်က ဝက်ဝက်ကွဲဆိုတော့ အကျယ်အကျယ်တွေ လာနေမှာ စိတ်ရှုပ်တာနဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး။ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ မနေနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာသာ သတ္တိမွေးပြီး ဇွတ်ရေးချလိုက်ကြရတာပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေဘောတော်ငြိုမှာ အမျက်တော်ရှမှာမျိုးကို ဘယ်သူမဆို လက်ရှောင်ချင်ကြမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ ကျနော်လဲ “ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်စွ၏ ဆိုစများလျား ထားပချေမိ ငါ့ဝန်ရှိခဲ့” အဖြစ်မခံချင်လို့ ချရေးလိုက်ပါပြီ။ ဒေါ်စုတို့ ပြည်နယ်တွေမှာ ဝင်မပြိုင်သင့်၊ ကိုယ့်သွေးချင်းတွေရဲ့နေရာကို အထူးသဖြင့် အခုလို ပြည်ထောင်စုသားတွေ ရင်ကြားစေ့ဖို့ အဖက်ဖက်က ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီလို လုံးဝမလုပ်သင့်။ … Continue reading →
Myanmar’s by-elections and its future prospects
Thursday, March 29, 2012 By NYUNT SHWE Special to The Japan Times The Myanmar by-elections will be the fairest and cleanest in the history of our country when they take place April 1. Withoutadoubt, Aung San Suu Kyi … Continue reading →
“မြန်မာ့ဗုဒ္ဓသာသနာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေချင်ရင် ကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်ကြ” (၁)
Posted on March 25, 2012	by nyuntshwe
ဗုဒ္ဓသာသနာကို အသန့်စင်ဆုံးသန့်စင်တဲ့သာသနာတစ်ရပ်အဖြစ် မြင်ချင်သူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာမွန်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျနော်သိသလောက် ထင်ထင်ရှားရှား ရဟန္တာကိုယ်တော်မြတ်အနေနဲ့ နိုင်ငံနဲ့အဝှန်းကျော်ဇောခဲ့တဲ့ရဟန်းဆိုလို့ စွန်းလွန်းဂူကျောင်းဆရာတော် ဦးကဝိ တစ်ပါးသာ ကြားဖူးပါတယ်။ ဦးကဝိတဖြစ်လဲ ဦးကျော်ဒင်ဟာ ပါဠိကို ပုတ်လောက်ရေးပြရင်တောင် ဘာမှန်းမသိတဲ့ စာမတတ် ပေမတတ် တောင်သူတစ်ဦးပါ။ အစပိုင်းမှာ မြင်းခြံမှာ ရုံးစေလုပ်ဖူးပါတယ်။ သူက လောကနဲ့သံသရာကိုကြောက်တဲ့အတွက် သူ့မိတ်ဆွေများဆီက နည်းယူပြီး တရားထိုင်တာပါ။ ဘယ်သူမဆို စာတတ်တတ်မတတ်တတ် တရားကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဝိရိယစိုက်ပြီးအားထုတ်ရင် တရားပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပြောကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြင်းပြင်းပျပျအားထုတ်တဲ့အတွက် မဂ်လေးတန် … Continue reading →
Posted on March 16, 2012	by nyuntshwe
(သို့မဟုတ်) ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေလိုလူမျိုးများအတွက် ဒီမိုကရေစီဆိုတော့ အစုံသုပ်တို့ စပ်ထမီတို့ကို လက်ခံရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကြိုက်မှစား၊ ကြိုက်မှဝတ်ပေါ့။ အရသာလဲရှိ အဟာရလဲဖြစ်တဲ့ အသုပ်ဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့။ ဟိုလူဒီလူကို စားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းတန် တိုက်တွန်းသင့်တာပေါ့။ အမြင်တော့လှပါရဲ့ ချဉ်ချဉ်စူးစူးလေးမို့ အရသာမဆိုးပေမဲ့ အဟာရမဖြစ်တဲ့အပြင် ဝမ်းလျှောလွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ သတိပေးကြ၊ ရှောင်ကြပေါ့။ ကိုလွဏ်းဆွေဟာ ဆေးဆရာဝန်ဒေါက်တာဆိုတော့ ဆေးနဲ့ ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သူ့အကြံဥာဏ်တွေဟာ အခြေအမြစ်ရှိနိုင်တယ်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှု ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သူ့နယ်မဟုတ်သလို အထူးအခြား လေ့လာဆည်းပူးထားတဲ့ … Continue reading →
Stories about inner freedom
Posted on March 15, 2012	by nyuntshwe
http://www.innerfreedom.dk/html/stories_inner_freedom_english.html The Freedom of Man According toalegend…..there was onceatime when all human beings were unconditionally free from the prison of the mind, but they so abused their freedom that the gods decided to take it away … Continue reading →